Ungacoca njani kwaye ugcine indawo kwi-Android yakho | Iindaba zeGajethi
Ngeli xesha siza kubona amanye amanyathelo esinokuthatha kuwo ukucoca kunye ufumane indawo kwisixhobo sethu se-Android. Kungenzeka ukuba kulo nyaka i-SM Los Reyes Magos ayisizisanga i-smartphone entsha sicinga ukuba eyethu ilungile kwaye ngokucoceka ngokubanzi singayilahla okwexeshana.
Ewe, kwimeko apho siza kukushiya uthotho lwezinto onokuzenza kwifowuni yakho ye-Android ukuze ibe nempendulo engcono kwimisebenzi, icocekile kwaye ngaphezu kwako konke esivumela ukuba sifumane indawo. Ngaphandle kwamathandabuzo, kulo nyaka i-2020 inokuba lixesha elifanelekileyo lokutshintsha isixhobo ukuze ngelixa oku kusenzeka siza kubona Amaqhinga amancinci okucoca isixhobo sethu sangoku.
Ngaphambi kokuba wehle uye kwishishini kubaluleke kakhulu ukuba siphumelele ukhuphelo lwefowuni yethu yonke. Ewe siyazi ukuba linyathelo ekungekho mntu uthanda ukulwenza kuba lifuna ixesha elincinci, nangona sihlala sisithi kubaluleke kakhulu ukuchitha imizuzu embalwa okanye neeyure ukwenza ukhuphelo olupheleleyo lwe-smartphone yethu, kunokuba kamva uyazisola ngokulahleka kwedatha, iifoto, amaxwebhu okanye izinto ezinje.
Kuyanyanzeleka ukuba ugcine engqondweni ukuba xa sisusa umxholo we-Android yethu kunzima ukuyifumana kwakhona, ukuba akunakwenzeka ukuba asinayo i-backup, ke Phambi kokuba uqale ucime nantoni na Kuthatha ixesha ukubuyisela yonke i-smartphone.
1 Cima iifoto onazo kwifowuni yakho
2 Izicelo esingasazisebenzisi
3 Iifoto, iividiyo, ii-WhatsApp memes
4 Cima iimovie okanye uthotho lweefilimu osele uzibonile
5 Ngaba ndiyayifaka i-app ukucoca ifowuni?
6 Ukufaka inkqubo ngokutsha kunokuba sisisombululo esomeleleyo
Cima iifoto onazo kwifowuni yakho
Njengesiqhelo, kufuneka sihambe inyathelo ngenyathelo kwaye into yokuqala yeyona ilula kunye neyona nto ixhaphakileyo phakathi kwabasebenzisi, yona isihloko sithi, ukucima iifoto esinazo kwisixhobo uqobo. Eli lelona nyathelo licothayo kuba kufuneka sihambe nganye nganye sizikhetha imifanekiso esingasayifuniyo okanye ethe yajika yaba mbi Ngexesha lokuzenza okanye zonke ezo zinto isikrini Ukuqokelela kwaye emva koko akusaboniswa.
Sinokusebenzisa naziphi na izicelo ezikhoyo ukususa imifanekiso eyimpinda, kodwa asiyicebisi ngenene kuba inokwenza izinto zibe nzima ngemifanekiso efanayo, ke elona cebiso lililo lokuchukumisa igalari ye-Android yethu kukwenza ngesandla Nokuba oko kuthetha ukulahlekelwa lixesha kuyo.
Ngokuqinisekileyo lolukhetho lwesibini okanye lokuqala kwiimeko ezininzi. Inkqubo ye- Inani lezicelo esizifumene kwi-Android yethu kwaye esingazisebenzisiyo iyakhula ngokuhamba kweentsuku kwaye uninzi lwazo siyazikhuphela kwaye silibale ukuba zifakiwe, ke lixesha elifanelekileyo lokwenza ukucoca ngokubanzi.
Isithuba ekuhlala kuzo zonke ezi zixhobo kwisixhobo sihlala sikhulu njengeefoto, ke ayingomsebenzi ekufuneka siwushiye owokugqibela, ukude kuwo, sinokuthi oku kuyakuhlala kuyindlela yokuqala okanye yesibini emva kokucima iifoto kunye neevidiyo kwi-Android. Indawo yasimahla iya kukhula ngokubonakalayo ngezi zenzo zibini, ngoku sinokuqhubeka neminye imisebenzi.
Iifoto, iividiyo, ii-WhatsApp memes
Ngamaqela angaphezulu nje, kuqhelekile ukuba iimemes ezininzi kunye ne-bullshit ziqokelele kule app yemiyalezo. Eli lelinye inyathelo elibalulekileyo ekufuneka ulithathele ingqalelo lokufumana indawo kwi-Android yethu kwaye kukuba "ubungakanani bemizi-mveliso" ye iifoto, iividiyo, ii-gifs, ii-memes, iividiyo kunye nezinye i-bullshit kwi-WhatsApp imiyalezo ye-app.
Singayisusa ngokuthe ngqo yonke le nto kwi-app ngokwayo, kodwa kuqala singagcina ezinye zeefoto okanye umxholo ukuba sifuna ngqo kwiWhatsApp reel, siyabona ukuba ikhona kwaye sigcina le nto siyifunayo. Nje ukuba oku kugqityiwe singasusa ngokuthe ngqo yonke ifolda, ewe, susa loo folda ngokupheleleyo kumphathi wefayile oyithandayo okanye ngokuthe ngqo kwigalari uqobo.
Okwangoku kubalulekile ukuthi sinokuthi kwi-WhatsApp ukuba ingagcini ngokuzenzekelayo into esiyikhupheleyo kuyo, kufuneka sikwazi ukufikelela kuyo Useto> Idatha kunye nokugcinwa kwaye ujonge ukhetho ukuba ungagcini umxholo ngokuzenzekelayoKufuneka sikwenze ngesandla xa sifuna ukugcina into ethunyelwe kuthi.
Cima iimovie okanye uthotho lweefilimu osele uzibonile
Inqaku elinye lokugcina engqondweni xa sisebenzisa uhlobo lweNetflix olusivumela khuphela iimovie okanye uthotho Ukukwazi ukuzibona ngaphandle koxhumano lwe-intanethi kukuzicima xa sele sizibonile. Yonke le mxholo ithatha indawo eninzi kwi-Android yethu nangona sinesixhobo esinogcino olukhulu, siya kuthi ekugqibeleni sigcwalise ukuba asizicimi ezi bhanyabhanya okanye uthotho.
Ke enye ngale ndlela ikwabalulekile ukushiya lo mxholo ngaphandle ukuze ufumane isithuba kwaye kukuba konke oku kuyongeza kwaye kule meko uninzi lwe-MB okanye i-GB esinokuzikhulula ukuba sinothotho okanye iimuvi ezikhutshelweyo xa sihamba nohambo. Cima abo ungafuniyo.
Ngaba ndiyayifaka i-app ukucoca ifowuni?
Lo ngomnye wale mibuzo oqhele ukuza kuthi kakhulu kwaye kwimeko yam ndingathi ngokobuqu andibacebisi konke konke, kungcono ukucoca ngokubanzi isixhobo ngesandla, ukuba uyangxama singasusa i-cache, sinokucima iifoto, iividiyo, usetyenziso kwaye senze oko sixoxe ngako kweli nqaku, kodwa Iiapps ezithembisa ukucoca izixhobo zethu ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo kunokuba yingxaki kunokuba sisisombululo.
Unokuba nolunye lwezi zicelo zithembekileyo ezifakwe kwi-Android yakho kwaye luyakusebenzela, nangona kuyacetyiswa ukuba ukhangele okushiyekileyo ngesandla kwaye ukucime ngqo ngaphandle kwezicelo zomntu wesithathu ezinokuthi zigcine ulwazi esilucimayo okanye olucothayo isixhobo ngakumbi. Ukuba unayo kwaye ufuna ukuyisebenzisa, qhubeka, kodwa ngaphandle koko cima yonke into ngesandla.
Ukufaka inkqubo ngokutsha kunokuba sisisombululo esomeleleyo
Ngaphandle kwamathandabuzo, konke oku kulungile kakhulu ukufumana indawo yasimahla kwisixhobo sethu kodwa ukuba sizifumana sikwiimeko ezigabadeleyo esinokukwenza kukususa yonke into ngokubuyiselwa ngokupheleleyo kwezixhobo. Ewe isenokuvakala inzima kodwa Ukuseta kwakhona isixhobo kunokuphucula kakhulu amava omsebenzisi Ukuba i-Android yethu imbi kakhulu kwaye ngentla apha khange sikwazi ukusombulula ingxaki.
Unokwenza nantoni na oyifunayo kodwa ngaphezulu kwayo yonke into khumbula inyathelo lokuqala eli ukhuphelo kwi-PC yakho alunakuba lungekho. Cinga ukuba kuzo zonke iimeko singalahlekelwa yile fayile, ifoto okanye uxwebhu esiludingayo xa sisenza olu hlobo lokucoca, ke kubaluleke kakhulu ngaphambi kokuba siye emsebenzini ukuze senze ikopi epheleleyo yezixhobo zethu. Emva koko siya kuthatha isigqibo sokuba siyisuse okanye singayisusi loo yogcino, kodwa ubuncinci sinogcino lwedatha xa kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungacoca njani kwaye ugcine indawo kwi-Android yakho